မာတင် Vrijland | မေးခွန်းတစ်ခုကိုအခွင့်အာဏာကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့စဉ်းစားပါ
စာမျက်နှာများ Navigation Menu
ပြောင်းလဲမှု subscription ကို
ဆုံးရှုံးသွားသော password ကို
categories Navigation Menu ကို
အဆိုပါ matrix ကို Saturn
Pim က Fortuyn
ရဲတပ်ဖွဲ့ NFI OM
Theo Van Gogh ၏ပန်းချီကား
ဖြစ်ရပ်မှန် Jeroen က Denis
ဖြစ်ရပ်မှန်က Mike Stick
ယောဘသည်9/ 11 အတွင်းပိုင်း
Posted by ကို Martin အခမဲ့တိုင်းပြည် မေလ 23, 2017 အပေါ်
Ariana Grande မန်ချက်စတာဖျော်ဖြေပွဲနယ်ပယ်တွင်ဖွယ်ရှိသတ်သေတိုက်ခိုက်
အသေခံဗုံးခွဲ 22 နှင့် 59 မန်ချက်စတာ Arena မှာဖျော်ဖြေပွဲ Ariana Grande ကာလအတွင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရဘို့ပြုစေသည်
Posted by ကို Martin အခမဲ့တိုင်းပြည် မေလ 22, 2017 အပေါ်
IS: သူတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးသောအရာကိုတိုက်ဖျက်ဖို့မွတ်စ်လင်ပြည်နယ်များနှင့်အတူ Trump ဆိုင်းဘုတ်များစာချုပ်
Donald Trump, သူ့ရွေးကောက်ပွဲကတိတော်များနှင့်အလေ့အကျင့်နှင့်ပိုပြီးအတွက်ဝိရောဓိ
Posted by ကို Martin အခမဲ့တိုင်းပြည် မေလ 18, 2017 အပေါ်
ပျက်ကွက် kabinetsformatie မင်းသားအဆိုပါဟိဂ်အတွက်အစည်းအရုံး
လူအမုန့်နှင့်ဆပ်ကပ်ပွဲ, ရုပ်မြင်သံကြား, ဘောလုံး, ရုပ်ရှင်, ဂီတ, ဆပ်ပြာ Opera နဲ့ဒီမိုကရေစီယောင် Give
Posted by ကို Martin အခမဲ့တိုင်းပြည် မေလ 11, 2017 အပေါ်
အဆိုပါအက်တမ်ဗုံး, အကြီးမားဆုံးခြိမ်းခြောက်မှု? အရာအားလုံးစစ်တပ်စက်မှုဇုန်ရှုပ်ထွေးဗဟိုပြု? သို့မဟုတ်တစ် သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်ရှိသလော
Posted by ကို Martin အခမဲ့တိုင်းပြည် မေလ 8, 2017 အပေါ်
ကြယ်ပွင့်ဝိညာဉ်ရေးမှာနယ်သာလန်မြင့်တက် Martijn ဗန် Staveren?
သငျသညျ (ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာအများကြီးဖြစ်ပျက်လိုမျိုး) ကိုမကြာခဏ "matrix ကို" ဟူသောဝေါဟာရကိုအသုံးပြုခဲ့လျှင်သင်အလိုအလျှောက်အချိန်နှင့် Martijn ဗန် Staveren ပေးထားကြသည်
Posted by ကို Martin အခမဲ့တိုင်းပြည် မေလ 5, 2017 အပေါ်
Trans-လူ့ Cyborg ယောက်ျားသည် Elon Musk ကြီးတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်သို့မဟုတ် DARPA ကဟန်ပြ?
သင်တန်း (TNT) လျာထားသော Neuroplasticity, cogintieve သင်ယူမှုကျွမ်းကျင်မှုများ၏အမြန်နှုန်းနှင့်ထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့ရည်ရွယ်ထား
Posted by ကို Martin အခမဲ့တိုင်းပြည် မေလ 1, 2017 အပေါ်
Edith Schippers ယခုသင့် DNA ကိုပရိုဖိုင်းကိုလိုလား
ဝန်ကြီး Edith Schippers နောက်တဖန်ကျင်းပရန်အဘယျသို့ (အထွက်) ထိတ်လန့်? တစ်ခုခုသင့်ရဲ့ DNA ကိုကို (Photoshop ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်လွတ်)
Posted by ကို Martin အခမဲ့တိုင်းပြည် ဧပြီ 29, 2017 အပေါ်
ဒီ website နှင့်ငါ၏အမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ, သူတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ image ကိုအကဲဖြတ်ရန်လူတွေကိုလှုံ့ဆော်
Posted by ကို Martin အခမဲ့တိုင်းပြည် 11-29-16 အပေါ်
Deutsche ဘဏ်နှင့်ဂျပန်ဘဏ်ပြိုလဲခြင်းငှါ၎င်း, ဟောကိန်းထုတ်အဖြစ်ဘဏ္ဍာရေးနျူကလီးယားရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ?
Posted by ကို Martin အခမဲ့တိုင်းပြည် 9-26-16 အပေါ်
စီးပွားရေး မှစ. ကပို
Posted by ကို Martin အခမဲ့တိုင်းပြည် 7-15-16 အပေါ်
တိုနီဘလဲနှင့် Balkenende ငါလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုအီရတ်အရှုပ်
Posted by ကို Martin အခမဲ့တိုင်းပြည် 7-7-16 အပေါ်
ဟစ်တလာ၏သူးလီလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် Fetullah Gülen Hizmet လှုပ်ရှားမှုအကြားတူညီ
Posted by ကို Martin အခမဲ့တိုင်းပြည် 8-5-16 အပေါ်
Donald Trump နှင့်ဟီလာရီကလင်တန်နှစ်ဦးစလုံးသည်ဖါရောဘုရင်အမျိုးအနွယ်?
Posted by ကို Martin အခမဲ့တိုင်းပြည် 5-18-16 အပေါ်
သမိုင်း မှစ. ကပို
မေလ 23, 2017 အတွက်အပေါ် Posted ယေဘုယျ |
သတိပေးခြင်း: Count (): Parameter တစ်ခုခင်းကျင်းသို့မဟုတ် Countable အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသောကြောင့် object တစ်ခုဖြစ်ရပါမည် /home/martinvrijland/public_html/archive/wp-includes/class-wp-comment-query.php လိုင်းပေါ် 405
မှတ်ချက်များကိုပိတ်ထား မန်ချက်စတာဖျော်ဖြေပွဲနယ်ပယ်တွင်ဖွယ်ရှိသတ်သေတိုက်ခိုက်ဘို့ Ariana Grande
မေလ 22, 2017 အတွက်အပေါ် Posted ယေဘုယျ |
မှတ်ချက်များကိုပိတ်ထား IS: သူတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးသောအရာကိုတိုက်ဖျက်ဖို့မွတ်စ်လင်ပြည်နယ်များနှင့်အတူ Trump ဆိုင်းဘုတ်များစာချုပ်
မေလ 18, 2017 အတွက်အပေါ် Posted ယေဘုယျ |
မှတ်ချက်များကိုပိတ်ထား အဆိုပါဟိဂ်အတွက်သရုပ်ဆောင်အစည်းအရုံး kabinetsformatie ရန်ပျက်ကွက်
မေလ 11, 2017 အတွက်အပေါ် Posted ယေဘုယျ |
မေလ 8, 2017 အတွက်အပေါ် Posted ယေဘုယျ |
မှတ်ချက်များကိုပိတ်ထား ကြယ်ပွင့်ဝိညာဉ်ရေးမှာနယ်သာလန်မြင့်တက် Martijn ဗန် Staveren?
မေလ 5, 2017 အတွက်အပေါ် Posted ယေဘုယျ |
မှတ်ချက်များကိုပိတ်ထား Trans-လူ့ Cyborg ယောက်ျားသည် Elon Musk ကြီးတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်သို့မဟုတ် DARPA ကဟန်ပြ?
မေလ 1, 2017 အတွက်အပေါ် Posted ယေဘုယျ |
မှတ်ချက်များကိုပိတ်ထား Edith Schippers ယခုသင့် DNA ကိုပရိုဖိုင်းကိုလိုလား
ဧပြီ 29, 2017 အတွက်အပေါ် Posted ယေဘုယျ |
မှတ်ချက်များကိုပိတ်ထား ကမ္ဘာ၏သင့်ရဲ့ image ကိုပြုကြပါသလား?
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်နဲ့အပြီး U-အလှည့် Donald Trump
ဧပြီ 18, 2017 အတွက်အပေါ် Posted ယေဘုယျ |
မှတ်ချက်များကိုပိတ်ထား Donald Trump နှင့်ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင် U-အလှည့်
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်နဲ့အပြီး Donald Trump နှင့်တူရကီဆန္ဒခံယူပွဲအတွက်အာဒိုဂန်၏အောင်ခြင်း: U-အလှည့်
ဖက်ဆစ်ဝါဒ 2.0 '' စမတ်မြို့ '(စမတ်စီးတီး) ၏အယူအဆကနေတစ်ဆင့်ကျော်ရှင်းပြီဖြစ်ပါတယ်
ဧပြီ 17, 2017 အတွက်အပေါ် Posted ယေဘုယျ |
မှတ်ချက်များကိုပိတ်ထား ဖက်ဆစ်ဝါဒ 2.0 '' စမတ်မြို့ '(စမတ်စီးတီး) ၏အယူအဆကနေတစ်ဆင့်ကျော်ရှင်းပြီသည်
ကျနော်တို့ (မီဒီယာ) ဟုဆိုကြသည်ဖြစ်သောကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားအန္တရာယ်
ဧပြီ 16, 2017 အတွက်အပေါ် Posted ယေဘုယျ |
မှတ်ချက်များကိုပိတ်ထား ကျနော်တို့ (မီဒီယာ) ဟုဆိုကြသည်ဖြစ်သောကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားအန္တရာယ်
ဧပြီ 14, 2017 အတွက်အပေါ် Posted ယေဘုယျ |
မှတ်ချက်များကိုပိတ်ထား Hoaxes နှင့်မှားယွင်းသောအလံတိုက်ခိုက်မှုများအတွက်: စာတမ်း, antithesis နှင့်ပေါင်းစပ်မှတဆင့်ကမ္ဘာသစ်အမိန့်မှ
ဒါဟာကစားပွဲကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ chessboard အပေါ်ကစားနေသည်ကိုဘယ်လိုနားလည်နိုင်ဖို့ရန်ခက်ခဲဖြစ်ပုံရသည်
ဧပြီ 10, 2017 အတွက်အပေါ် Posted ယေဘုယျ |
မှတ်ချက်များကိုပိတ်ထား အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့ဖြင့်သေသားသမီးတို့အဘို့, ဒါပေမယ့်နေတိုးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အဖြူရောင်ခမောက်ဆရာဝန်များအားဖြင့်?
အဖြူရောင်သံခမောက်လုံးဆရာဝန်များကအဆိပ်ဓာတ်ငွေ့တိုက်ခိုက်မှုအမှန်တကယ်ကင်မရာမျက်စိအသတ်ခံရပြီးနောက် SWEDHR ကျူးလွန်သောသူသည်ဆရာဝန်တစ်ဦး၏အဆိုအရအမြိုးသားအကယ်တင်နိုင်ခဲ့ခံရဖို့ခဲ့ကြသည်
မှားယွင်းသောအလံ Sarin ဓာတ်ငွေ့တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးဆီးရီးယားအပေါ် Tomahawk တိုက်ခိုက်မှု?
မှတ်ချက်များကိုပိတ်ထား မှားယွင်းသောအလံ Sarin ဓာတ်ငွေ့တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးဆီးရီးယားအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုများအတွက် tomahawk?
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကမ္ဘာကြီးဟာဆီးရီးယားစစ်တပ်ကစွပ်စွဲအဆိပ်ဓာတ်ငွေ့တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်အမေရိကန်သမ္မတ Trump ၏ထင်ရသောအလွန်တိကျမှန်ကန်စွမ်းဆောင်မှုများကလှုခဲ့ပါတယ်
Martin အခမဲ့တိုင်းပြည် op Arnhem အတွက်နှစ်ခုရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ခဲ့ယုံကြည်တယ်လိင်တူချစ်သူများ၏စစ်မှန်သောဘာလဲ?
realfraggy op ရဲတပ်ဖွဲ့သည်အကြမ်းဖက်မှု: သူသည်မိမိအသားညှပ်ပေါင်မုချမထားချင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ 13 လူကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကကောင်လေး Tilburg အဖမ်းခံရ
Martin အခမဲ့တိုင်းပြည် op ပူးပေါင်းကြံစည်မှုစဉ်းစားတွေးခေါ်, ရွယ်တူချင်းဖိအားနှင့်အများစု၏အမြင်နှင့်အပြုအမူကိုလိုက်နာလေ့
Spock op ဗြိတိန်ဘဏ္ဍာရေးနှလုံးအတှကျအမဆိုးယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ဂျီဘရောလ်ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဆန္ဒခံယူပွဲ
Advertenie Google က